Cofa iphupha Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umzuzwana nje omfutshane wokungahoywa kwanele kwaye sinamava angathandekiyo wokuba kubuhlungu kangakanani ukucofa okanye ukutshayisa umnwe emnyango okanye kwidrowa. Intlungu iya kuwo wonke umzimba kwimizuzwana nje, iphakamisa ukuba sizinqumle izandla endaweni yokubamba inxenye yawo.
Nangona kunjalo, into evutha ngokucocekileyo xa ucima umlilo inokuba neziphumo ezibi kwiimeko ezinqabileyo. Ukuba, umzekelo, umlenze ubambeke kakhulu kwingozi kangangokuba imithambo yegazi ebalulekileyo ayisabonelelwa, kwimeko embi, ilungu elonzakeleyo lomzimba linokunqunyulwa.
Ewe kunjalo, izinto azisoloko kufuneka zibalasele xa sicofa izandla, iinyawo, ulusu, okanye ezinye izinto. Ngokukodwa kuba, ngesiqhelo, sinokuzikhulula ngokukhawuleza kwimeko ebuhlungu. Kwi el mundo Ukusuka emaphupheni, umfanekiso wephupha "unokubambeka" kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu. Ke ngoko, ukutolikwa kwesimboli kukwahluka kakhulu.
1 Isimboli yephupha «i-pinch» - ukutolika ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukucofa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukucofa» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «i-pinch» - ukutolika ngokubanzi
Nabani na ekufuneka enamava kwihlabathi lamaphupha ukuba babanjiwe kufuneka baqonde ngala mava ukuba bakwimeko yokubamba inyani. Iphupha lijinga nje kancinci ingxaki iqine kwaye akukhathaleki ukuba ujika okanye ujika njani, kubonakala ngathi ayinakukhululwa.
Ukutolika isimboli yamaphupha "pinch" ngendlela eyodwa, kuya kufuneka ujonge ukuba yintoni ekuncinilisileyo. Isandla esibanjiweyo, umzekelo, sibonisa ngokungathandabuzekiyo ukungakwazi ukwenza into ngamanye amaxesha. Unyawo olubanjiweyo lunokubonisa ukuba abanye bayakuthintela ukuba uye phambili.
Qiniseka ukuba unika ingqalelo imeko ezijikeleze imeko yephupha. Ngaba ukhe wakunceda omnye umntu okanye kuye kwafuneka uzame ukuphuma ngokwakho kule meko? Ukuba ushiyeke wedwa kule ngxakeko, kufuneka ulumke. Musa ukuzivumela utsaleke ebomini bokwenyani kulingwa ukuya. Izithembiso ezenziwe kuwe malunga noku aziyi kuzukiswa. Ke ekugqibeleni, kuya kufuneka ubone ukuba uphuma njani kwingxaki.
Uphawu lwephupha «ukucofa» - ukutolikwa kwengqondo
Isisiseko sokuba umfanekiso wephupha "ucofe" umntu ophuphayo ukuba uyinto ebomini bokuvuka. ngocoselelo ngakumbi kufuneka usendleleni. Oku kuyinyani ngakumbi xa kufikwa kuvavanyo lwabanye abantu. Nokuba iluphawu oluhle ukuthembela kwabanye abantu ngaphandle kokubhukisha.
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka uvume ngokunyanisekileyo ukuba abantu abaninzi bexesha labo bafanelwe yiyo yonke into, kodwa hayi ukuthembakala okungagungqiyo.
Ukuba awuyazi le nto, usenokuziva ngathi unento ebambekileyo. Kwinqanaba lomzimba, sinokukuva oku esiswini okanye kumqolo, oziva ngathi kukho into exakekileyo kwaye ke asikwazi ukuphefumla ngokufanelekileyo. Ke unganikeli ingqalelo kuphela kumaphupha akho, kodwa uhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwisimboli sephupha "pinch" Iimpawuukuba umzimba wakho uthumela.
Uphawu lwephupha «ukucofa» - ukutolika kokomoya
Kwinguqulelo egqithileyo, umfanekiso wephupha unokuba sisalathiso se Ukuthintela kukuhamba kwamandla. Ukuphupha kunokuzama ukusombulula le nto ngokwenza i-acupuncture, imithambo yokuphefumla okanye ukucamngca ukuze amandla abalulekileyo akwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kwakhona.